किन कुकुर खाना फूड रंग छ | Martech Zone
किन कुकुर खाना फूड रंग छ
शनिबार, अक्टोबर 28, 2006 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
सेठ Godin बारेमा लेख्छन् हेरफेर र Dilbert निर्माता स्कट एडम्स हेरफेरको बारेमा लेख्छन्।
प्रत्येक दिन, शाब्दिक सयौं विज्ञापन एजेन्सीहरू कडा मेहनत गरीरहेका छन्, कर्पोरेट विचारहरू कसरी यसमा घरेलु र वास्तविक भइरहेको छ भन्ने आशमा प्रणालीमा झल्काउने भनेर पत्ता लगाउने प्रयास गरिरहेका छन्।
सेठहरू आश्चर्यचकित भए जब राजनीतिज्ञहरूले सोशल मीडियामा हेरफेर गर्न थाल्छन् ... मेरो अनुमान छ कि उनले सुनेनन् कि क्याथरिन ह्यारिसले पहिले नै आफ्नो ब्लगको साथ प्रयास गरेका थिए जब एक कर्मचारीले पहिलो केही टिप्पणीहरू गरे (ध्यानपूर्वक उनलाई पहरेदार नागरिकले आईपी ठेगानाबाट पछाडि ट्रक गरे) ।
यदि स्वतन्त्र हुनेछ, सबैभन्दा राम्रो कपालको साथ सबै भन्दा लामो उम्मेदवारहरू किन चुनाव जित्छन्?
मलाई थाहा छैन यदि तपाईंले कहिल्यै "कालो टोपी" बनाम "सेतो टोपी" सर्च इञ्जिन अनुकूलनको बारेमा सुन्नुभएको छ भने, तर यो यस विषयको सही डिकोटोमी हो। ब्ल्याक ह्याट एसईओ वास्तविक छैन भनेर विधिहरू मार्फत प्लेसमेन्ट प्राप्त गर्न खोज इञ्जिनहरूको हेराफेरी हो। व्यवसाय परिणाम सुधार गर्न क्रममा व्हाइट ह्याट एसईओ खोज ईन्जिनमा प्लेसमेन्ट सुधार गर्न सामग्रीको ईन्जिनियरि। हो। दुबैको लक्ष्य खोज प्लेसमेन्ट सुधार गर्नु हो ... तर सेतो टोपीले गरिरहेको छ किनकि उनीहरूको विचारमा यसको राम्रो प्लेसमेन्ट हुनुपर्दछ।
सेठको अवलोकन र स्कटको टिप्पणी दुबैमा मेरो प्रतिक्रिया हो कि लोगहरू अधिकांशतः अज्ञानी छन्। हामी अनुहार, गन्ध, एक ब्रान्ड, ह्यान्डशेक ... रंगमा विश्वास गर्छौं। यी सबै बाह्य प्रभावहरूले हामीभित्र भावना जगाउँदछन्। बजारहरूले आशा गर्छन् कि भावनाहरूको सहि संयोजनले हामीलाई खरीदमा लैजान्छ। धेरै विरलै हामी केहि मेहनत गर्न को लागी वास्तव मा केहि बुझ्न को लागी कोशिश गर्छौं। यदि तपाई वास्तवमा कसैलाई क्रिप्पी केहि बेच्न चाहानुहुन्छ भने, कसरी हुन्छ भनेर बताउनुहोस् महसुस, यो कत्ति राम्रो काम गर्दछ।
पेरिस हिल्टन ह्यामबर्गर बेच्दै।
Verizon तपाइँको पछाडि 'हजारौंको नेटवर्क' बेच्दै हुनुहुन्छ (काश तिनीहरू यसको सट्टामा काउन्टरको पछाडि थिए)
नास्कर यूपीएस शिपिंग बेच्दै
हेक, तपाइँ यहाँ मा एक ज्वार व्यावसायिक बाट आफ्नो मनपर्ने गीत डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ ज्वार साइट! मलाई विश्वास गर्नुहुन्न? यहाँ एक छ:
[अडियो: https: //martech.zone/audio/tidesong.mp3]
यो कुकुर खाना खाना रंग छ किन उही कारण छ। कुकुरहरु रंग अन्धा छन् र do्गहरू मानव जस्तो देख्दैनन्। रंगले स्वाद वा पोषण थप गर्दैन। के कुकुर फूड कम्पनीले कुकुरको खानामा र color्ग थप्न को लागी हेरफेर गर्न सकेन किनकि यो कम्पनीको लागि डिग्मा फोनी सबमिशन सेट अप गर्ने हो? यो निश्चित छ ... तर तथ्य यो हो कि मानिसहरूले यसलाई किन्दछन् किनकि यो 'राम्रो देखिन्छ'। जो फ्याट सामग्री, कृत्रिम सामग्री, प्राकृतिक अवयवहरू… हामी मध्ये धेरै जसो लागि प्याकेज को फिर्ता जाँच गर्न को लागी समय लिन चाहन्छ।
मानिस वा टेक्नोलोजीलाई हेरफेर गर्न जबसम्म त्यहाँ लाभ हुन्छ, कालो ह्याटहरू जहिले पनि यसको फाइदाको लागि रहनेछ।
म पेरिसबाट ह्याम्बर्गर किन्न चाहन्छु र त्यो थपको उद्देश्य हो, राम्रो जानकारी
कुकुरहरू रंग-अन्धो छैनन्।
तपाईंले आफ्नो मूर्खता नदेखाई आफ्नो कुरा भन्न सक्नुहुन्थ्यो कि कुकुरहरू उनीहरूको गन्धको इन्द्रियमा भर पर्छन्, दृष्टि भन्दा बढी, र त्यसैले खानाको रंग खरिदकर्तालाई खाना अझ सुन्दर देखाउनको लागि मात्र हो। म यहाँ अनुसन्धान गर्न खोज्दै छु, तर इन्टरनेट यसको लागि राम्रो ठाउँ होइन किनकि कुनै पनि मूर्ख मूर्खले अनलाइन लेख लेख्न सक्छ।
तपाईंले पोस्टको बिन्दु छुटाउनुभयो - कुकुरको खाना कुकुरको लागि रंगीन हुँदैन, यो किन्न मानिसको लागि रंगीन हुन्छ। हो, कुकुरहरूले देख्न सक्छन् केही रंगहरू।
मलाई आशा छ कि कुनै दिन तपाईको शिष्टाचारले उपयोगी टिप्पणी प्रदान गर्ने तपाईको क्षमतालाई समात्न सक्छ।
रोकिनु भएकोमा धन्यवाद,